Iindaba-Inguqu kwidijithali ye-RIU ngexesha le-COVID-19
Iilebheli zeShelf zombane (i-ESL)
Utshintsho kwidijithali yeRIU ngexesha le-COVID-19
I-RIU ye-35 ye-world chain ye-RIU yasungulwa eMallorca yintsapho yaseRuu ngo-1953 njengenkampani encinci yeeholide, kunye nokuvulwa kwehotele yokuqala yedolophu ngo-2010, i-RIU Hotels & Resorts ngoku ineehotele ezingama-93 kumazwe angama-19 awamkela ngaphezu kwe-4,5 iindwendwe ezizizigidi ngonyaka.
Ukusuka kwiilebheli eziphelelwe lixesha ukuya kwi-ZKONG yamafu ESL
Njengenxalenye yedrive yayo yokuphucula amava abathengi ngexesha le-COVID-19, ihotele yetyathanga ye-RIU ibikhangela iindlela zokuphucula ukujonga kunye nokuziva kweendawo zayo zokutyela, kunye nokuqinisekisa ukubanakho kokunikezela ngolwazi malunga nokutya ngeelwimi ezininzi kodwa nembeko kumgama ekuhlaleni. Ngaphandle kwe-RIU yayinomdla wokunciphisa ixesha kunye neendleko zokuhlaziya iimenyu.
I-Abensys, iqabane lethu elithembekileyo eSpanish eliqale le projekthi, lathi ukudityaniswa kweenkqubo ze-RIU nge-API yeZKONG kwakulula. Zonke ii-ESL ze-ESL ezihamba kunye kwindawo ekhuselekileyo, ekhawulezayo kunye neqonga elifanayo, elinokusetyenziswa kwihlabathi liphela ngaphandle kofakelo, abasebenzi kunye neendwendwe banokuqiniseka ukuba ulwazi lokutya lugcinwa luchanekile kwiilwimi ezahlukeneyo kwaye luhlaziywe ngexesha langempela.
· Ukufakwa ngokukhawuleza nangokulula
· Umboniso ocacileyo kunye obalaseleyo
· Iinkonzo zonxibelelwano
· Ukhetho olungenamda kuyilo lomxholo
Ixesha Post: Oct-22-2020
Ii-ESL zethu zikulungele ukusetyenziswa kubuchwephesha beBluetooth kunye ne-NFC, umzobo opheleleyo, kunye nemiboniso emithathu-yemibala. Ngaphandle kokubonisa iinkcukacha zemveliso njengexabiso ...
Lwedilesi: Building No17, Singapore Tech Park, Hangzhou